Inona no tsy mampitovy ny gorodona WPC sy PVC? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no tsy mampitovy ny gorodona WPC sy PVC?
Ahitsio: Denny　2020-01-16　Mobile
WPC dia manondro ny gorodona vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika, hazo vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo.
PVC dia plastika polyvinyl klorida, ary ny gorodona PVC mahazatra dia tsy afaka manampy lafarinina hazo.
Fametrahana sy fananganana: Ny fametrahana rihana WPC dia tsotra sy mora, ary tsy mitaky fomba fanamboarana sarotra be, izay mahavonjy be dia be ny fotoana sy ny vidin'ny fametrahana; haingana be ny fametrahana ny gorodona PVC, tsy mila arovana simenitra ary tsara ny fepetra momba ny tany. Dingana manokana ho an'ny tontolo iainana ho an'ny fatorana, saingy fepetra takiana amin'ny fananganana fananganana.
Matahotra ny fandoroana sigara sy fitaovana maranitra; gorodona WPC dia manana hery manohitra ny afo, afaka mahavita mandrehitra am-pandehanana, tonga amin'ny B1, famonoana ny tenany raha toa ny afo, ary tsy mamokatra entona poizina.
Ny gorodona PVC dia fitaovana tsy voajanahary, izany dia manondro ny gorodona vokarina miaraka amin'ny polyvinyl chloride fitaovana. Raha atao manokana dia vokarina amin'ny alàlan'ny fampiasana polyvinyl klorida sy ny kitrokeliny copolymer ho toy ny akora fototra lehibe izy io, ny fampidirana fitaovana ampiana, ary ny fampiharana ny làlan-drindrina na fandanjana, fanitarana, na fitrandrahana amin'ny fizarana mitovitovy amin'ny takelaka mitohy. Ny gorodona WPC vita amin'ny akora vita amin'ny hazo-plastika dia endrika vaovao miendrika akora sy kalitao avo lenta izay novokarina tamin'ny alàlan'ny fomba fiasa samy hafa mifangaro miaraka amin'ny plastika isan-karazany aorian'ny fanodinana mety.
Ny gorodona PVC dia manana fitrandrahana mafana mafana, ny famoahana hafanana mitam-bolo, ary koefisioka fanitarana hafanana kely, izay somary maharitra. WPC conducteur malemy tondra-drano, raha miova ny mari-pana ambiny any ivelany, avy eo ny fisehoana sy ny fihatsahana anatiny dia mora ny mahatonga ny fanitarana sy ny fanodinana fanodinana, sns., Eo am-panaovana hetsika maharitra dia hanafoana ny gorodona vita amin'ny hazo-plastika.
Inona no tsy mampitovy ny gorodona WPC sy PVC? Ny atiny mifandraika